Aqoonkaab Habab aad ku xoojin karto awood iyo firfircoonida Maskaxda | Aqoonkaab
Habab aad ku xoojin karto awood iyo firfircoonida Maskaxda
May 28, 2016Arrimaha bulshada
Maskaxdu sida xubnaha kale ee jidhka waxay u baahan tahay dhaqdhaqaaq iyo fikir iyo tababar si aanay u lumin qiimaha maskaxda , sidoo kale waxay u baahan tahay nasasho iyo raaxo si ay u xoojiso shaqadeeda , hadaba maqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa hababka ugu muhiimsan ee aad ku xoojin karto awooda iyo firfircoonida maskaxaada .
1.Waxyaabo cusub isku day : mar kasta oo aad bilowdo inaad qabato shay cusub waxay dhiirigelinaysaa maskaxda waxaanay kor u qaadaysaa awoodaada fahan ,waxyaabaha cusub waxay noqon karaan jimicsi cusub oo aad sameyso ama cunto aanad hore u cuni jirin waxa muhiima waa inaad qabato wax hore aanad caado u lahayn..
2.Jimicsi Joogta ah : sida ay soo bandhigtay cilmi baadhisyo badan jimicsigu waxa uu xoojiyaa unugyada maskaxda ,waxaanay maskaxda ka caawisa inay samaysato unugyo cusub.
3.tababar xasuustaada: marar badan waxaad maqasha dadka oo ka cabanaya illowshiiyo ku batay , ma jiro shakhsi ama digtoor dawayn kara illowshiiyaha , qof kasta isaga ayaa xoojin kara awoodiisa xasuuseed, ka bilow inaad xifidid lambarka teleefankaaga ,qayb aayado quraana ,xadiis sidaana joogtee hubaal xasuustaadu way kordhaysaa.
4.Dhinaca wanaagsan u feker : werwerka waxa uu hoos u dhigaa koritaanka unugyada maskaxda ,hadaba dhinaca wanaagsan oo aad u fekerto gaar ahaan marka aad ka fekereyso mustaqbalka , ilaahay oo aad talo saarato kuna kalsoonaato waxay xoojinayaan awooda maskaxda .
5.cun cuno nadiif ah : cuntada aad cunayso waxay saamayn ku leeyihiin shaqada maskaxda , 20 % cuntada aynu cuno waxa nuuga oo isticmaala maskaxda sidaasi daraaded ku dadaal cunida cunto nadiif ah
6.Akhri buugaagta : akhrisku waxa uu jidhka iyo maskaxdaba ka ilaaliyaa werwerka badan iyo dhiig karka , waxaanu siiya nasasho iyo jawi bedelasho ku saabsan buuga uu akhrinayo , qofka waxa uu helaya jawi la mid ah kan uu akhrinayo .
7.seexo hurdo kugu filan : hurdadu waxay maskaxda u sahasha inuu cusboonaysiisto xubnihiisa , isla markaana tirtiro sunta.
8.yaree isticmaalka calculator (xisaabiye) : ku tababar maskaxdaada inay garato xisaabaha fudud , hana caadaysan isticmaalka xisaabiyaha kaas oo maskaxdaada la qabatin la samaynaya.
9.akhri qur’aanka: quraanku waxa uu muhiim u yahay maskaxda waxa uu siiya awood nafsiyadeed waxa uu tirtiraa werwerka sidaasi daraadeed wehel ka dhigo qu’aanka kariim ka ah .
10.asxaabtaada fikradaha la wadaag : asxaabtaada oo aad fikradaha la wadaagto waa hab aad ku kordhin karto awood fikrad abuur ee aad leedahay waxaad helaysaa fikrado badan , waxaad curinaysaa fikrado badan.
E-MAIL : info@aqoonkaab.com
Previous PostFaa’idooyinka caafimaad ee Kalluunka Iyo Cudurada Uu Daaweeyo. Next PostMuhimada caafimaad ee Rumaanka